Koorsadan, waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo xilliyada si xigmad leh. Tan waxaa lagu magacaabaa: barashada qiimaha waqtiyada.
Fadlan ogow, kani maahan koorso isku xidhka, oo ah mawduuca tababarka gaarka ah. Haddii aadan weli iskudarsamin isku xirnaanta ficillada, waxaan kugula talinayaa inaad kubilaabato tababarka “Ogaanshaha sida loogu isticmaalo isku duubka faransiiska”.
U adeegsiga ficillada faransiiska si wanaagsan July 10th, 2021Tranquillus
horeIskuxir ficillada faransiiska